maha-izy-azy – Blaogin'i Voniary
Étiquette : maha-izy-azy
Tiava an’Andriamanitra ary tiavo ny namanao tahaka ny tenanao ary. Azo fintinina amin’ireo hevitra roa ireo ny didy folon’Andriamanitra. Noho izany, fototra afahanao mitia ny hafa ny FITIAVANAO NY TENANAO ALOHA. Ahoana àry ny itiavako ny tenako manoloana ny fihetsik’ireo manodidina ahy amiko sy ny rafitra apetraky ny fiarahamonina? Ny avy ety ivelany Ny endrika... Lire la Suite →